Job Vacancy for IT Assistant - MYSTERY ZILLION
Vote Up0Vote Down thuyaaung March 2011 Posts: 99Moderators Responsibilities * Provide day-to-day end users and technical supports on hardware and software. * Ensure PC and end users comply with Company's IT policies, guidelines and procedures. * Software and hardware peripheral administration and maintenance. * Ensure day-to-day network and daily backups operations are not interrupted. * Maintain and upgrade necessary hardware and software patches. * Write and maintain IT documents and circulars. * Any other related matters that may arise.QualificationDegree or Diploma in Information Technology or Computer Science/TechnologyGood communication skill Fluent in English *Fresh graduates are encourage to apply*Interested candidates kindly send in you resume to [email protected]http://www.gkmyanmar.com	5 မှတ်ချက်များ sorted by Votes
Vote Up0Vote Down fate April 2011 Posts: 46Registered Users form ပိတ်သွားပြီလားခင်ဗျာ။ နောက်ပြီးတော့ ဘယ်နေ့တွေ ရုံးပိတ်လဲသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်က အချိန်ရမယ့်အလုပ်မျိုးရှာနေလို့ပါ။ အလုပ်လုပ်ရင်းသင်တန်းဆက်တက်ချင်လို့ပါ။	Vote Up0Vote Down thuyaaung April 2011 Posts: 99Moderators fate said:form ပိတ်သွားပြီလားခင်ဗျာ။ နောက်ပြီးတော့ ဘယ်နေ့တွေ ရုံးပိတ်လဲသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်က အချိန်ရမယ့်အလုပ်မျိုးရှာနေလို့ပါ။ အလုပ်လုပ်ရင်းသင်တန်းဆက်တက်ချင်လို့ပါ။ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်တွေမှာပိတ်ပါတယ် ..။ ဖောင်ကမပိတ်သေးပါဘူး ။ အချိန်ရမယ့်အလုပ်မျိူးတော့မဟုတ်ဘူး ..။	Vote Up0Vote Down freeaccess April 2011 Posts: 121Registered Users အကို အခြေခံ လစာ လေး သိလို ့ရမလား ခင်ဗျာ။ကိုမြိတ်သား	Vote Up0Vote Down thuyaaung April 2011 Posts: 99Moderators အခြေခံလစာ ကိုကျွန်တော်မသိပါ ..။ Account Department က လစာကိုသတ်မှတ်ပးတာဖြစ်ပါတယ် ။ အင်တာဗျူး၀င်တဲ့အခါ ခန့်မှန်းလစာကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ် ။	Vote Up0Vote Down fate April 2011 Posts: 46Registered Users လိပ်စာ လေးပို့ပေးပါဦး။ အစိုးရရုံးပိတ်ရက် အတိုင်းဆိုရင်တော့ မိုက်တယ်၊	AddaComment ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းစတင်ရန်
April 2011 freeaccess
April 2011 thuyaaung